Orinasa fanenoman-damba ho an'ny daholobe - Mpanamboatra lamba ho an'ny daholobe any Sina, mpamatsy
Wujiang Spray, sivana vovoka indostrialy miaraka amina sosona 3 sy lelan-tsolika 1, tsy tantera-drano ary azo alaina, endrika ergonomika.
Saron-tava amin'ny vovoka vita amin'ny lamba vita pirinty
Azo sasana miverimberina, maharitra mandritra ny fotoana tsy misy fanovana endrika, tsy mora miova endrika, tsy mora mihena, tsy mora mihemotra, tsy mora mamono kavina vita amin'ny sofina fisaka, malaso malefaka ary fatotra matevina marefo, tsy sofina henjana, azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra
Saron-tava tarehy vovoka lamba
Ny habeny dia antonony, mifanentana amin'ny endrika bika indrindra, mifanaraka tsara amin'ny sofina, tady elastika, tsy mifanaraka amin'ny sofina.
Pad fanoloana mpitsabo
Ventsitra tsara, fanosotra ny hamandoana haingana, vokarin'ny fahitana telo-metatra tsara.
Lamba landihazo voafantina, maivana sy malefaka, ahazoana aina. Volavola fametahana velcro azo ovaina amin'ny volom-baravarana any aoriana, mora hitafy, tsy mila miahiahy momba ny haben'ny fehiloha, mety amin'ny karazana vatana isan-karazany. Fomba fanjairana marina, tsy misy kofehy mihazakazaka na milatsaka. Tsy manjavona na mandoto hafa
Palitao mpitsabo mpanampy
Ny famolavolana paosin-pahefana lehibe dia mora sy azo ampiharina, ary ny famohana ny fehikibo sy ny fonosana dia nohajaina tamin'ny lamba mifanohitra hampitombo ny hatsarana sy ny lamaody amin'ny fomba.
Biby tsy misy rano ho an'ny mpitsabo mpanampy
Tenda maranitra, fanamiana ary fanodinana malama mba hifanentana amin'ny hoditra tsy misy fanelingelenana, ary ny famolavolana bokotra snap dia mora ny manitsy ary tsy mametra.
Tantera-drano sy fanoherana maloto, porofon-dripaka, lamba lamba tsy misy rano Tpu, sariaka amin'ny tontolo iainana, tsy misy tsirony, mahatohitra maloto ary mora diovina. Ny aloha dia vita amin'ny fitaovana tsy misy rano ary ny lamosina vita amin'ny landihazo, izay tsy gilasy amin'ny ririnina ary miaina amin'ny fahavaratra.
Lamba landihazo voafantina, maivana sy malefaka, ahazoana aina. Teknolojia fitaterana marina, tsy misy hazakazaka na haidina.
Pataloha fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy, Fanodinana santionany sy famokarana, Lamba firakotra roa sosona, Akanjo fohy vita amin'ny ravina haingam-pandeha ho an'ny lehilahy, Akanjo fohy fanatanjahan-tena haingam-pandeha, Palitao fanatanjahan-tena,